बाबुले अल्पायुमा नै संसार छाडे, आमाले दुवै आँखा देख्दिनन्, यी साना नानीबाबुहरु जस्ले खाना नै पाउँदैनन्, यस्तो विपत कसैलाई नपरोस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > बाबुले अल्पायुमा नै संसार छाडे, आमाले दुवै आँखा देख्दिनन्, यी साना नानीबाबुहरु जस्ले खाना नै पाउँदैनन्, यस्तो विपत कसैलाई नपरोस्
admin January 6, 2021 January 6, 2021 समाचार, समाज	0
नुवाकोट । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा रहेको दांसिग गाउँमा बस्छिन् कान्छिमाया तामांग । कान्छिमाया एक दृष्टिबिहीन महिला हुन् । उनले दुवै आँखा देख्न सक्दिनन् । जन्मदै उनको आँखाको ज्योति थिएन । सानैबाट संसारको उज्यालो देख्न नसकेकी कान्छिमायाको तीन सन्तान छन् । तीनैजना उत्राउत्रै जस्तै देखिन्छन् । ती आफ्नी तीन सन्तानलाई कान्छिमायाले एक्लैले हुर्काउँदै छिन् । तर कसरी ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।
आफु आँखा देख्न नसक्ने । श्रीमानले पनि आफु र छोराछोरीसंगै यो संसार छाडेको झण्डै सात महिना हुन लागेको रहेछ । घर सकुशल भनिएका उनै मात्र थिए रे । उनले पनि यो संसार नै छाडेर गए । श्रीमानले यो संसार छाडेपछि कान्छिमाया पुर्ण रुपले एक्लो हुन पुगिन् । श्रीमानको मृत्युपछि उनको काँधमा घरको र छोराछोरी दुबैको जिम्मेवारी आईलाग्यो ।
उनी भन्छिन्,‘आँखा देख्नि भनेर काम गर्न नसक्ने भन्दै कसैले काम पनि दिंदैनन् । यिनीहरुलाई कस्ले दिन्छ खाना खुवाउनु ? म आँखा देख्न सक्दिन । गाह्रो छ ।’ कान्छिमायाको यो कुराले मन भारी बनायो । उनले यो कुरा सजिलै हाँसी हाँसी सुनाईन् मानौं कि उनलाई असहज भन्ने भएकै छैन ।
सायद हुन सक्छ आफ्नो दुःख अरुलाई देखाउन र सुनाउन चाहिनन् कान्छिमायाले । उनको भनाई अनुसार उनका छोराछोरीले ननुहाएको थुप्रै भयो । कस्ले नुहाँईदिने ? उनले आँखा देख्न सक्दिनन् । आँखा देख्न सक्नेहरु न उनको घरमा आउँछन् न त उनी र उनका छोराछोरीलाई सहयोग गर्छन् ।
जन्मदै उनको आँखाको ज्योति थिएन । सानैबाट संसारको उज्यालो देख्न नसकेकी कान्छिमायाको तीन सन्तान छन् । तीनैजना उत्राउत्रै जस्तै देखिन्छन् । ती आफ्नी तीन सन्तानलाई कान्छिमायाले एक्लैले हुर्काउँदै छिन् । तर कसरी ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।
देशभित्रै राम्रो अस्पताल बनाएको भए हजारौं सीता बा,च्ने थिए कमरेड: ज्वाला सङ्ग्रौला
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस, यसबाट सबै जना सचेत रहनुहोला
भर्खरै बाग्लुङबाट आयो यस्तो खबरः पेटमा बच्चा भएकि ३० बर्षिया सम्झनाले किन गरिन देहत्याग?
माइतीघरमा निर्मलाको लागि न्याय माग्दै पोष्टर टाँस्दा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ
केटी देख्नै नहुने यी कस्ता श्रीमान्! कान्छी भित्राउन नदिदा लिए श्रीमतीको ज्या’न (भिडियो सहित)
१ वर्षसंगै बस्दा धेरै पटक बच्चा फा’ल्न लगायो, मैले गर्भ तु’ह्याई रहे ! (भिडियो सहित)
यी हुन् सुधिर चौधरीलाई सगरमाथा आधार सिविर पुर्याउने पाइलट सिद्धार्थ गुरुङ, त्यो दिन के भएको थियो खुलाए सबैकुरा!
रेलको लिगमा टिकटक बनाउँदै थिए युवक, दियो ठक्कर- गयो ज्यान!
घामबाट चार्ज हुने गाडी सार्वजनिक, कति छ बजार मुल्य ? पुरा हेर्नुस्